Diiwaangelinta Dhacdada Rant | Martech Zone
Arbacada, December 7, 2011 Axad, Sebtembar 30, 2012 Gowraca Robby
Xilligii guga, waxaa dhacday dhacdo layaableh, cajaa'ib leh, cajaa'ib leh oo ay kafaala qaaday hay'ad naxdin leh oo la yiraahdo Xirfadlayaal Shaqo Degdeg ah. Barnaamijka laftiisu wuxuu ahaa saf firfircoon oo ku hadla, oo ay ku jiraan Indy's Peyton Manning. Shaqaaluhu waxay u fuliyeen dhacdadan si bilaa ixtiraam leh waxaanan u maleynayaa in dadkii badnaa ay si aad ah ula yaabeen. Xaqiiqdii, waxaan haystaa hal cabasho oo keliya - mana lahan maalinta dhacdadaas.
Nasiib darrose, cabashadaasi waa doozy. Dhacdadani waxay lahayd khibrad diiwaangelineed oo xun. Degganaan kursigaaga, kani wuxuu noqon doonaa raacid dheer.
Waan ogaa inay xumaan doonto bilowgii, marka waxaan qaatay dhowr shaashad. Waa tan sida ay ku bilaabatay.
Maalin maalmaha ka mid ah, waxaan farriintan ku helay sanduuqa sanduuqa. Qaado gaser oo igu soo biir sawirka ka dib:
Waa inaan qiraa, kani ma aha emayl xun. Wicitaanka ficilku wuxuu noqon karaa waxyar oo ka hooseeya bogga, laakiin waxay ku jirtaa waraaqo geesinimo leh, hoosta ka xariiqay: Codso tikidhadaada maanta. Waxay xitaa ku daraan URL-ka bogga diiwaangelinta isla meesha ay ku taal jirka emaylka. Taasi waa wax caqli gal ah, maxaa yeelay haddii aan tan ku aqrinayo aaladda mobilada ama qof uu daabacay emaylka, weli waan “gujin karaa” xiriirka anigoo ku celcelinaya!
Marka xariirkaasi halkee buu maray? Waxay u dhacday…
Hagaag, marka hore waxay ahayd inaan maro bogga soo degitaanka interstitial. Hagaag, guji kale waa wax yar oo xanaaq badan, laakiin tani maahan wax xun. Runtii ma aqrin boggan, waxaan riixay batoonka weyn… taas oo igu horseeday…
Waqtigan xaadirka ah ayaa mar labaad layla weeray bog kale, oo ay ku jiraan oodles macluumaad ah. Waa tan jadwalka, waa kuwan cinwaanka goobta, khariidad, jihooyinka wadista, xiriiriyeyaasha bulshada ee Express. U fiirso naftaada:
Laakiin dabcan, midkoodna tan runtiina weli ma khusayso. Weli waxaan u baahanahay inaan "codsado tikidhada" ka hor intaanan daneynin dhammaan faahfaahintaan. Tilmaamaha wadista saxda ah ee goobta dhib malahan ilaa aan tikidhada helo.
Ma doonayo inaan aado boggaaga LinkedIn ama aan ku raaco Twitter-ka hadda. Waxaan hadaf ku hayaa maskaxda: iska qor munaasabadaada! Waxaan ka hadli karnaa kaqeybgalka warbaahinta bulshada ka dib Waxaan helaa tikidhada Si kastaba ha noqotee, miyaanay ahayn zillion kale oo taageerayaasha Peyton Manning ah oo isku dayaya inay tikidhada helaan isla waqtiga saxda ah?
Hagaag, badhanka ayaa la riixay, taas oo igu hogaamineysa qaab caan ah oo la yiraahdo…
Bogga Diiwaangelinta Dhabta ah
Haa, taasi waa aniga oo faalloonaya. Waad xasuusnaan kartaa inaan xiiseynayo fikradda ah hal guji diiwaangelinta dhacdo. Waxaan u maleynayaa inaan wax yar la yaabay in suuqgeynta heer caalami ah ee suuqgeynta laga helo ExactTarget (waan jeclahay idinka!) . Uguyaraan, waad ogtahay cinwaankayga iimaylkayga!
Hagaag, uguyaraan hadda waan dhammeeyay. (Oops, ku dhowaad ku dhufo "baaji" maadaama ay aad u dhowdahay. Dheh, waxaan jeclaan lahaa in Jakob Nielsen uu ku tilmaamo fikradahan inay yihiin fikrad xun in ka badan toban sano ka hor. Sikastaba…)
Bogga Diiwaangelinta Dhabta ah, waa la sii wadaa
Laakiin sida muuqata, hal bog diiwaangelin kuma filna. Waxaan u baahanahay bog labaad sababo jira awgood.
Waxaa laga yaabaa in ay dhacdo in dadku ay ka tagaan foomka markey yimaadaan kan? Maaha sidii in foomku wax xaqiijin dhab ah samaynayo. Haa, waxaan isku dayay inaan galo nambarka sirta oo leh dhammaan xarfaha iyo lambar taleefan oo laga sameeyay. Oo waxaan dhagsiiyey “Badbaadi oo Midka Dambe” (Waxaan u socday “Keydso” shaqadayda, laakiin ma ahayn intaas oo shaqo.) Tani waxay ii horseedaysaa…
Xaqiijinta Aad Doonaysay inaad Diiwaan Geliso
Haa, runti waxbaan si sax ah u qortay! Taasi waa waxa boggan sheegayo oo uu u baahan yahay Mar labaad ayaan haddana riixayaa.
Hadda waa in nalaga dhammeeyaa. Ugu dambeyntii! Marka hadda waa waqtigii loogu talagalay
Xaqiijinta Diiwaangelinta oo aan xaqiijin ahayn
Waraaqaha waawayn ee ku qoran tabka cinwaankeedu wuxuu ku qoran yahay "Xaqiijin." Laakiin hadaad aqriso qoraalka, oo aan kuugu qarxiyay daboolka shaashadda hoose, waad arki kartaa in dhab ahaantii tani runti maahan xaqiijin. Xaqiiqdii, hadda waxay umuuqataa inay fursad tahay "inaad codsato tigidh" runti waa fursad "loo codsado fursad inaad ahaato la tixgeliyey tigidh. ”
Fiiro gaar ah: Mar dambe ayaan dadka qaar la hadlay shaqaalihi Express, habkani macno ayuu u leeyahay dib u milicsiga. Waxay doonayeen inay ku dhiirrigeliyaan munaasabadda dhagaystayaal ballaadhan, laakiin waxay sidoo kale doonayeen inay isku dayaan oo ay hubiyaan in macaamiisha la doorbido iyo rajooyinka ay ahaayeen kuwa safka hore ku jiray. Waxaan u sheegay in aragtidayda luqadda ku jirta emaylka iyo dhiirrigelintu aysan ka turjumayn nooc xulasho ah, iyo inaan dareemay inaan shantii daqiiqo ee waqtigayga lumiyay oo keliya. Waxaan u maleynayaa inay u badan tahay inay qaateen go'aan ganacsi oo caqli badan marka la eego xulashada kaqeybgalayaasha u fiicnaan lahaa ganacsigooda, laakiin ma ahi taageere erayga i keenay halkaan.
Hadda, weli si qurux badan ayaan ula dhacsanayn nidaamkan diiwaangelinta. Kaliya igama aysan yeelin inaan riixo nus dersin shaashad ah aniga oo ii ogolaanaya inaan bixiyo macluumaad been abuur ah inta badan, sida muuqata ma lahan awood lagu go'aamiyo taariikhda hadda. Hadday sidaas sameysay, looma baahna inaan fiiriyo jadwalkayga si aan u ogaado haddii ay hadda tahay ka hor ama ka dib Abriil 15. Nidaamku waa inuu awood u leeyahay inuu muujiyo farriinta saxda ah!
Sikastaba, waan dhameeyay. Qiyaas Waxaan sugi doonaa ilaa iyo May 2 si aan u maqlo haddii aan tikit helo. Laakiin sug, waxaa jira…
Xaqiijinta emaylka ee ay tahay inaan badbaadiyo
Xaqiiqdii nidaamkan diiwaangelintu wuu ogyahay qofka aan ahay. Haddana waa inaan keydsadaa emayl tikit bilaash ah? Sida iska cad anigu waxaan ahay qofka kaliya ee leh cinwaanka emailkan.
Xaqiiqdiina nidaamkan diiwaangelintu wuu awoodaa tirin. Weedha ah “helitaanka tikidhada” waxay tusineysaa in nidaamku uusan awoodin inuu la socdo tirada kuraasta ee horay loogu qoondeeyay!
Emailka yaabka leh
22-kii Abriil, waxaan helay email kale. Waxaan u qaatay inaan wax barto haddii tikidhada la iga doonayo. Laakiin halkii, waxaan helay wax aad u jahwareersan:
Waqtigan xaadirka ah, ma aanan hubin waxa socda. Haddii lay “xulan lahaa” si aan uga soo qayb galo tikidhada caadiga ah, ka dibna aan fursad u helo inaan ku soo galo tartankan? Muuqaalka badhanka "Tigidhada Codsiga" ee salka hoose ayaa waliba ahaa mid jahwareer leh. Tani waxay dib ugu celisay isla foomkii aan hore u dhammaystiray. Marka malaha diiwaangelinteydii asalka ahayd waa la iska indhatiray? Waxay si cad ugu direen isla cinwaanka emaylka, sida ku cad hoosta.
Waxaan go aansaday inaan sifiican kaligey iskaga tago. Ka dibna…
Emailka Aqbalaada Dhabta ah
On May 4, Waxaan helay fariin email this. Waxay umuuqatay aqoon markii hore, laakiin markaa waxaan ogaaday inaan kujiro!
Waan fahmi waayey sababta ay u rabeen inay xafiiskayga yimaadaan si ay tikidhada ii siiyaan. Waxaan uun daabici lahaa emaylka. Qofna wuu ka tuuray albaabka hoostiisa, laakiin cidina ma joogin waqtigaas markaa waxaan u maleynayaa inay qashin safar ahayd.
Kuuma sheegi karo sida ay u weyneyd dhacdadii dhabta ahayd ee dhacday 18-kii Maajo. Khudbado fantastik ah. Dil weyn. Goob si qurux badan loo qurxiyay. Cunto wanaagsan oo firfircoon. Laakiin hoggaamintu waxay ahayd mid aad u xun, gaar ahaan tixgelinta sumcadaha heer caalami ah ee labada shirkadood ee ku lug leh diiwaangelinta dhacdada. Maxaa dhacay?
Waxaan u maleynayaa in ExactTarget iyo Cvent ay yihiin aagagag, oo waad u adeegsan kartaa iyaga sida aad u adeegsan karto tikniyoolajiyad kale. Waxaan u maleynayaa inay u badan tahay inay jirtay dhibaato xagga abaabulka ah oo ku saabsan dejinta nidaamka diiwaangelinta dhacdooyinka oo kooxdii tan sameysay aysan ka faa'iideysan khibraddii la heli lahaa si ay u qaabeeyaan khibradda diiwaangelinta. Farriinta waa inay noqotaa mid cad, si kastaba ha noqotee: dhacdooyinka waawayn waa inay lahaadaan diiwaangelin dhacdo fudud, oo si sahlan loo isticmaali karo. Taasi waa qayb ka mid ah suuqgeyntaada! Dad badan ayaa ku mashquulsan inta ay khibraddu socoto haddii ay fududahay in la diiwaangaliyo, ay fududahay in la tago, oo ay fududahay in la fahmo waxa aad bixiso.
Sidaas ayaa hadalkeygu ku dhammaanayaa.
7, 2011 at 9: 52 AM
Dhacdadu waxay ahayd mid layaableh, laakiin shaki iigama jiro maskaxdayda inay lumiyeen diiwaangeliyayaal aad u tiro badan intii ay socdeen sababo la xiriira jaahwareerka iyo qosolka. Ma siin doono iyaga baasaboor - iyadoon loo eegin shirkadooda iyo habka ay u socdaan. Waxa ay sheegayeen waxay macno ugu sameeyeen "iyaga"… maahan inay macno u sameysay "idinka". Iyo "adiga" waa inaad had iyo jeer wax ka badan tahay "iyaga".
7, 2011 at 10: 21 AM
Yaabid. Wax sidan oo kale ah ayaa iga dhigi lahaa inaanan rabin tikidhada kaliya mabda'a sheyga. Laakiin haddii ay diyaar u yihiin inay tikidhada ii soo gudbiyaan, waan ku farxi doonaa inaan iyaga tilmaamo. Marka hore waa inay fuulaan gaariga, oo ay bilaabaan wadista. Waxaan u sheegi doonaa jihada ka dib markay wadaan 12 mayl.